April 2016 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
သထုံက‎ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများသို့ ဆရာဦးသန်းနိုင်မှ ပေးပို့စာ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, April 30, 2016 News No comments
1.5.2016 နေ့ တွင် တတိယအကြိမ် အသည်းရောင်အသားဝါ B ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို
သထုံမြို့ သုဝဏ္ဏခန်းမတွင် မနက် ၆ နာရီမှ ၁၀ နာရီ အထိ
‪#‎ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်မှ‬ သွေးလှူရှင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ နှင့် ဆရာဆရာမ များ
‪#‎သထုံမြို‬့ နယ် အတွင်း ရပ်ကွက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ သူများ
# ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ မပျက်မကွက် ဆက်ဆက်လာရောက်ထိုးနှံကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ရပါသည်။
ထဲထည့်ထားသော ဆေးအာနိသင်အပြည့်လိုချင်ပါသောကြောင့်ဆေးထိုးချိန် ၆း၀၀ တိတိ အရောက်လာကြပါရန် ၅း၃၀မှာ ကားများကိုအရင်နေရာမှာ စောင့်ပေးမယ်။
ကားမရောက်က UTMN 09790160137ကိုဆက်သွယ်ပါရန်။
Credit to ဆရာ ဦးသန်းနိုင်
ပုံပါရဟန်းတော်၂ပါးကြွရောက်တော်မူလာရာလေဆိပ်တွင်ပစ္စည်းအိတ်မှားယွင်းပါသွားသည့်အတွက်ဆေးတပ်သားဖြစ်ဟန်တူသူ''SAW THA WAH"ကိုယ်တိုင်
လက် တွဲ ကူ ညီ
မောင်ဇင်ဗိုလ်အောင် B.Sc(Zoology) နှင့် မနီလာဦး B.Sc (Chemistry)တို့၏ မင်္ဂလာအစီအစဉ်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, April 30, 2016 ကျိုက္ခမီမြို့သတင်း No comments
"မင်္ဂလာမောင်နှံ မနီလာဦး နှင့် မောင်ဇင်ဗိုလ်အောင်" တို့
ယနေ့ မှစ၍ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကာ
တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး သစ္စာရှိရှိ ချစ်ချစ်ခင်ခင် မေတ္တာမပျက်
ရွှေလက်တွဲ၍ နှစ်ယောက် တစ်ဘဝ ခရီး၌ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့
ချစ်စရာ ဘဝ အမောပြေစရာ မိသားစုလေး ရာသက်ပန်ဖြစ်နိုင်ပါစေဗျားးး"
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ပညာသင်နှစ်အောင် အ.ထ.က ကျိုက္ခမီမြို့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် မြို့သူမြို့သားများကိုယ်စား
Credit to ကိုသက်ဝင်းပိုင်
မင်္ဂနေ့ရက် -၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၉)ရက် ၁-၅-၂၀၁၆ (တနင်္ဂနွေနေ့)(အလုပ်သမားနေ့)
မင်္ဂလာအချိန် - နံနက်(၈း၀၀)နာရီမှ (၁၁း၀၀)နာရီအထိ
အာသီသ - ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ကြွရောက်ပါရန်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၅)၊ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ နေ
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မာလာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂၆) နေ
ဦးခင်မောင်ဦး + ဒေါ်မြင့်မြင့်အောင်(ခ) ဒေါ်အေးပို့ တို့၏ သမီးငယ်
မနီလာဦး B.Sc (Chemistry)
(Ngwe Moe General Hospital)
"မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေး" သို့ အထက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါရန်
ဓါတ်ပုံ- Mi Htay Ong
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, April 30, 2016 Life No comments
ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မင်းဘ၀အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိူင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီစကားက ကြမ်းတမ်းချင် ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ တွေးရုံလေးပဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ဘ၀ဟာ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဘ၀နဲ့ ဘယ်တော့မှ တစ်သမတ်တည်း မတူနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ် မတတ်နိုင်တဲ့ အ၀တ်အစား ၀တ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ကား စီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မနေနိုင်တဲ့အိမ်မျိုးမှာ နေသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါပဲ။
ဒါကို ကျင့်သားရအောင်လုပ်ပါ။ နေသားကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူး။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သင့်မှာမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။
ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆
သမ္မတဦးထင်ကျော်ပြီးလျှင် နုိုင်ငံတော်အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တုိုင်းပြည်၏ နံပါတ် ၂ ခေါင်းဆောင်နှင့်အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးမှသာလျှင် ဒုတိယသမ္မတ ၂ ဦးက အသီးသီးနေရာတွင်ရှိနေကြောင်း သမ္မတရုံး၏ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ် သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်မှုတွင် ဖော်ပြထားသည်။နုိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်မှုမှာ အောက်ပါအတုိုင်းအဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ဧပြီ ၂၇ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက်အား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ယင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Credit to The Irrawaddy (Burmese Version)
"မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုတာ" သြဝါဒပေးသူဆရာတော် - ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, April 30, 2016 Knowledge No comments
"မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုတာ"
သြဝါဒပေးသူဆရာတော် - ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
မက္ကဆီကို နိုင်ငံဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ခရစ်ယာန်များတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲဒီ မက္ကဆီကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်စ လူ (၃၀) လောက် မြန်မာပြည် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မန္တလေးက မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝင်ဖူးပြီးတော့ စစ်ကိုင်း ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာပြီး ပါချုပ်ဆရာတော် ကျောင်း ရောက်လာပြီးတော့ ကျောင်းစောင့်တွေကို ခွင့်တောင်းတယ်။ "ဆရာတော်နဲ့တွေ့တုန်း မေးစရာရှိတာလေး မေးချင်ပါတယ်" တဲ့။
ဒါနဲ့ ဆရာတော်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေကတွေ့တဲ့အခါ မက္ကဆီကန်သူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ဘာမေးတုန်း ဆိုရင် "ဘုရားကြီး ဝင်ပြီး ဖူးတဲ့အခါမှာ (အမျိုးသမီးမဝင်ရ) ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တွေ့လာ တယ်တဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာက အဲဒီလို ခွဲခြား ဆက်ဆံ သလား" တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နေရာ အတော်များများမှာ အဆိုပါ ဆိုင်းပုဒ်နဲ့ စည်းကမ်းလေး တွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဥပမာ - ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ အလယ်ပစ္စယံ မှာဆိုရင် "အမျိုးသမီး မတက်ရ" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင် ထားတာ ရှိတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားမှာ ကျတော့လဲ "တံတားကို အမျိုးသမီး မကူးရ" ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီနိုင်ငံအကြောင်း သိပ်မသိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန် Tour Guide တွေ ခဏခဏ ပြဿနာတက်တတ် ကြတယ်။
ပါချုပ် ဆရာတော် က ဘာပြန်မိန့်သလဲဆိုတော့ - "This is not Buddhism. This isatradition." ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့။ ဒါဟာ "tradition" မြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ ခေါ်တယ်လို့ ပြောတော့မှ ကျေနပ် သွားတယ်။
Tour Guide လုပ်တဲ့ လူတွေကိုလည်း ပါချုပ်ဆရာတော်ဟာ တဆက်ထဲမှာလိုက်တယ်။ "မင်းတို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ လျှောက်မပြောနဲ့။ Guide လုပ်တဲ့လူကို အဲဒီလိုမေးလိုက်လို့ Guide ဖြစ်တဲ့လူက အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ ဘုရားရှေ့မှာ မတော်လို့လို့၊ ထမီတွေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ ဆိုပြီး အဲဒီလိုတွေ မပြောနဲ့တဲ့။ သူတို့ဆီမှာ ထမီ ခေါင်းပေါင်းပြီး ရေချိုးတဲ့ ယောက်ျား တောင် ရှိသေးတယ်တဲ့" ဆရာတော်က မိန့်တယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်က - "သီဟိုဠ်မှာဆိုရင် သူတလှည့် ကိုယ်တလှည့် ဝတ်နေတာ။ ထမီရယ် လုံချည်ရယ် ရှိတာ မဟုတ်ပဲ။ ဘာမှ မထူးဘူး။ ခေါင်းအုံးပေါ်လဲ ခြေထောက် တင်တာပဲ အဲဒီလူတွေ။ အဲဒီတော့ ခြေထောက်က နိမ့်ကျပြီး ခေါင်းက မြတ်တယ်လို့ ဘယ်လိုလုပ် ပြောလို့ ရမှာလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာ တူတူပဲပေါ့။
အဲဒီလိုမျိုးတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး tradition တွေက မတူဘူး။ ပြီးတော့ သီဟိုဠ်တို့ Chinese တို့က တစ်ခုခုပြရင် လက်နဲ့ မပြဘူး။ ခြေထောက်နဲ့ ပြတယ်။ (ဗမာကျတော့ ဒါ အင်မတန်ရိုင်းတယ်) ဒါ သူတို့ tradition ပဲလို့ ကိုယ်က နားလည်လို့ရှိရင် ပြဿနာ မဖြစ်ဘူး။ "ဟာ ဒီကောင် ရိုင်းလှချည်လား" ဆို ရန်ဖြစ်ကြ။ သူကလဲ ဘာရိုင်းမှန်း မသိဘူး။ ရိုင်းလှချည်လားဆို သူ့ကိုယ်သူလဲ ဘာရိုင်းမှန်းမှ မသိတာ။ သူ လုပ်နေကျပဲ ခြေထောက်နဲ့ ပြတယ်လေ။ ဒါ သူ့ ခြေထောက် အားလို့ ခြေထောက်နဲ့ ပြတာပေါ့။ ကိုယ်အားတာ ကိုယ်လုပ်တာ။ လက်နဲ့ ခြေထောက် တူတူပိုင်တာပဲ။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ် မှန်သမျှ လုပ် ကောင်းတယ်။ အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ မလုပ်ကောင်းဘူး။ ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်တယ်။"
မြနန်းဆရာတော် မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ စွယ်တော်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ချက် ရပ်ဆိုင်းခံရ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, April 30, 2016 Buddha, Knowledge No comments
ဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်ခဲ့တာက (BC 623)ဆိုတော့၊ ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် ၆၂၃ နှစ် ပိုစောခဲ့သလို၊ မိုဟာမက် ပေါ်ခဲ့တာက(AD 570)ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓ က မိုဟာမက် ထက်လည်း နှစ်ပေါင်း (၁၁၉၃)နှစ် ပိုစောခဲ့တော့ ၊ ယခု တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့စွယ်တော်(သွား) ရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း(၂၆၃၃) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ -အဲဒီလောက် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သွားအပေါ်မှာ သံသယမကင်းဖြစ်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကအဲဒီ့ သွားကို Genetic Engineering နည်းနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးလိုပါတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလို့ တရုတ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်တော့ သိပ္ပံပညာရှင်တို့စမ်းသပ်တွေ.ရှိချက်တွေကတော့ ……
(၃)၎င်းသွားထဲမှာပါတဲ့ DNA(Deoxyribo Nucleic Acid) ဟာ သာမန်လူသားတဦးရဲ့ DNA နဲ့မတူဘဲ Supreme Lord(အမြင့်မြတ်ဆုံးအရှင်သခင်) ရဲ့ DNA အဖြစ် ကောက်ချက်ချပါတယ်တဲ့ -အဲဒီသိပ္ပံတွေ.ရှိချက်ထွက်လာစဉ်မှာဘဲ အနောက်အုပ်စု အစိုးရတွေက သူတိုရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို စမ်းသပ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။
Why ??? -ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ
-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ဒီသတင်းကိုကြားရတာ ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသားမိမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျာ... ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကျော်သွားအောင် ဆင့်ကဲ Share ပေးလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ
ရင်နစ်ကြေကွဲဖွယ် သတင်းတစ်ပုဒ် ၃၀.၄.၂၀၁၆ စနေနေ့ဖြစ်စဉ်
ရနောင်းမြို့ စဖန်ပလားလမ်း မြန်မာအလုပ်သမား ကုမ္မဏီဝန်ထမ်းများ အချိန်မှီအလုပ်ဆင်းနိုင်ရန်အတွက် ကားစောင့်နေစဉ် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကားတိုက်ခံရမှုကြောင့် အခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ သုံးယောက်
သေဆုံးခဲ့ပြီး.... လူနာများအား ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာ ဆေးရုံ၌ လူယောက်
U Zin Laypyinnya.
၃၀ . ၄ . ၂၀၁၆ ယနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ.ရနောင်းမြို့
.SIFCO အအေးခန်း တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လက်ရှိသော မြန်မာ
အလုပ်သမား များ စက်ရုံသွားကားစောင့်ဆိုင်စဉ် ကားတိုက်ခံရပြီး
၁၀ဦး အတွင်းလူနာဖြင့် ရနောင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်
Credit to U Zaw Maung Facebook မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
မြန်မာအလုပ်သမား စီကိုကုမ္မဏီဝန်ထမ်းများ အချိန်မှီအလုပ်ဆင်းနိုင်ရန်အတွက် ကားစောင့်နေစဉ် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှဖြစ်ပြီး
ဦးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်မှုကို ကူညီသူ ကြွက်သားပျက်စီးပြီး အားနည်းတဲ့ ရောဂါတမျိုး ခံစားနေရတဲ့ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ရုရှား software ပညာရှင် Valery Spiridonov ။
လူ့ ဦးခေါင်းကို အစားထိုးဖို့ အကြံဟာ မဖြစ်နိုင်ဖူးလို့ ထင်ရှားတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် အများအပြားက တွက်နေကြတုန်းမှာပဲ အီတလီနိုင်ငံသား ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Sergio Canavero က သူဟာ လာမယ့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လူ့ဦးခေါင်း အစားထိုး ခွဲစိတ်မှုကို ပထမဆုံး စတင် စမ်းသပ်ဖို့ စီစဉ်ထားဆဲပဲလို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကြွက်သားပျက်စီးပြီး အားနည်းတဲ့ ရောဂါတမျိုး ခံစားနေရတဲ့ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ရုရှား software ပညာရှင် Valery Spiridonov က သူ့ခွဲစိတ်မှုအတွက် စေတနာနဲ့ အကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Canavero ရဲ့ အစီအစဉ်အတွက် Mayo ဆေးရုံက အငြိမ်းစား ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး Dr. Michael Sarr အပါအဝင် ဆေးပညာ အသိုင်းအဝိုင်းက ထောက်ခံသူတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ဟာ အန္တရာယ် သိပ်ကြီးပေမယ့် သူ့စမ်းသပ်မှုတွေအရ ကျောရိုးက အာရုံကြောမကြီးတွေကို ပြန်ပြီး ဆက်တာဟာ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရတယ် လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ Spiridonov ဟာ ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာက ကြွက်သားတွေကို မလှုပ်ရှားနိုင်သလို သူအသက်ရှည်ဖို့ လမ်းလည်း သိပ်မရှိဘူးလို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ခွဲစိတ်ချိန်ဟာ ၃၆ နာရီလောက် ကြာမြင့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ သူ့ခေါင်းကို အပူချိန် ၁၂ ဒီဂရီCelsius ဝန်းကျင်မှာ အအေးခံထားမှာပါ။ သူ့ခေါင်းကို ဖြတ်ပြီးတာ နဲ့ ဦးနှောက်သေနေပြီဖြစ်တဲ့ အလှုရှင်ရဲ့ ဦးခေါင်းနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်ပြီး ဆက်ဖို့ လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဦးခေါင်းတွေကို အစားထိုးကုသပေးခဲ့ဘူးတဲ့ သူတချို့ အပါအဝင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပေါင်း တရာနဲ့ တခြား ဆေးဝန်ထမ်း တွေပါတဲ့ အဖွဲ့က အကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်အပြီးမှာတော့ Spiridonov ကို သီတင်း ၃- ၄ ပါတ်လောက် သတိမေ့ပြီး ကိုမာ ဝင်ရောင်လုပ်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီလို လုပ်ထားချိန်မှာ ဆရာဝန်တွေက သူ့ရဲ့ ကျောရိုး အာရုံကြောမကြီးတွေကို ပြန်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်လာအောင် လုပ်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှားမှာ တခြားကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပုံမှန်လုပ်နေကြပေမယ့် ဦးခေါင်း အစားထိုး မှုကိုတော့ မျောက်တွေမှာပဲ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီစမ်းသပ်မှုအားလုံးတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့လူနာ Spiridonov ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အသစ်နဲ့ အသက်ရှင် နေနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ခွဲစိတ်မှုအပြီး တနှစ်အတွင်းမှာပဲ သူဟာ လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်မယ်လို့ Canavero က ခန့်မှန်းထားတာပါ။
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, April 30, 2016 Ubuntu No comments
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေပြောပြမှာ က Windows ကိုသုံးပြီး Ubuntu ကို Memory Sticks ပေါ်ကို ဘယ်လိုသွင်းရလည်း ဆိုတာကို ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အခု ပြမယ့်နည်းက Ubuntu 9.10/10.04.*/10.10/11.04/11.10/12.04 တွေကို USB Drive ပေါ်မှာတင်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Memory sticks ပေါ်မှာ သွင်းပြီးသွားတာ နဲ့ Live CD လိုသင့်ရဲ့ Memory Sticks ကနေ Direct PC မှာ Run လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းကို အသုံးပြုဖို့ အတွက်လို အပ်ချက်များ
Windows PC တစ်လုံး
Ubuntu 9.10/10.04/10.10/11.04/11.10 ISO
Memory Stick အနည်းဆုံး 2GB နှင့် အထက်(FAT 32 ဖြင့် Format လုပ်ပြီးသား)
Universal USB Installer ကို Download လုပ်ပါ။
Download လုပ်ပြီးသွားရင် Software ကိုဖွင့်ပါ။Software မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်သွားပါ။
အခုန က ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း Ubuntu ISO file တော့ရှိရမယ်။မရှိရင် ဒီမှာ Download လုပ်ပါ။
အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်းလုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် စက်ကို Restart လုပ်ပါ။boot တတ်တတ်ချင်း F2 ကိုနှိပ် ပြီး BIOSထဲမှာ First Boot Device ကို USB လို့ထားပါ (သို့) boot တတ်တတ်ချင်း F12 ကိုနှိပ်ပြီးလည်း Boot Order ကို USBလို့ရွေးပါ။
နောက်တစ်ခု ပြောရအုံးမယ် ဒီ USB ကနေလည်း သင့်ရဲ့ Hard Drive ကိုပြန် Insatll လုပ်လို့ရပါတယ်။
Guest Post of Bloggerakm.blogspot.com
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း သုခများစွာနှင့် ပြည်စုံကြပါစေလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်ဆက်သပါသည်။
ချဲတွက်နည်းသမားများ ချဲတွက်ရန် အချိန်တစ်ရက်ထပ်ရသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ဘ၀သမားများအတွက် ဘ၀အလှတွေကို ကျိုက္ခမီမြို့အင်တာနက်စာကြည့်တိုက်မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Friday, April 29, 2016 မြန်မာပြည်၏အလှအပများ No comments
ဘဝကို ကျားကန် နေသူတွေရဲ့ တစ်နေ့ တာ နိစ္စဓူဝ....
သဘာဝက အလှတွေအဖြစ် ဖန်တီးနေသော်လည်း..
သူတို့ အတွက်ကတော့ အလှတွေက ဘဝတွေ ဖြစ်နေလေရဲ့..
Credit to We Are Myanmar Facebook မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။
Credit to မူရင်းဓါတ်ပုံရိုက်သူများ